အသက် ၂၇ နှစ် - လိင်မှုကိစ္စညစ်ညမ်းမှုမရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုထိန်းချုပ်ထားသည် - သင်၏ ဦး နှောက် On Porn
Accounts ကိုပြန်ဖွင့်: စာမျက်နှာ 3
အသက် ၂၇ - ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများမရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်ကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်
နောက်ဆုံးရ Update ကို:
ဒါကြောင့်ငါအသက် (၁၂) နှစ်ကတည်းက (27M) ဟာစွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ပါ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှု (ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ TikTok၊ Instagram စသည်တို့) စသည်တို့ကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ခဲ့သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင် (တစ်လနှစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်) ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်၎င်းကိုနှစ်သက်နေဆဲဖြစ်သည်။
လတ်တလော၌ကျွန်ုပ်သည် ၁ လခန့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ငါ NoFap စိန်ခေါ်မှုကိုလည်းရက်ပေါင်း 90 (PMO မရှိ) ကြိုးစားခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမယ့်ငါပြီးစီးခဲ့တယ် ငရဲကဲ့သို့ခဲယဉ်းသည်နှင့်မလိုအပ်သောနှင့်အဆိပ်ပင်ဖြစ်ကောင်း? 🤔
ကြည့်ရတာ၊ ငါ porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါတိုင်း၊
porn မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် SUPER ADDICTIVE ဖြစ်ခဲ့သည်။
အခုတော့“ အတုလိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု” မရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတောင်မှကျွန်တော်ပျင်းစရာကောင်းသည်။ ငါ porn အသုံးပြုသောအခါငါရှိခဲ့ဖူးကြောင်းပြင်းထန်သောတပ်မက်မရကြဘူး။
ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်တွန်းအားများကိုသက်သာစေရန်နှင့်အချို့သော (ဖြစ်နိုင်သည်) ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောစိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ porn သည်ညီမျှခြင်းမရှိတော့သောအခါကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်များကိုလည်းပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်၊ အတိတ်ကာလက porn ကိုစွန့်ခွာလိုသောသူချင်းတစ်ယောက်၏ကျပန်းအတွေးများနှင့်ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးရှိရန်နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောမိသားစုရှိရန် just
ယခင် update ကို:
ယောက်ျားတွေ၊ ငါလုပ်နိုင်ရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ် ငါဒီ FUCKING စွဲစွဲလမ်းမှု၏ကျွန်ဖြစ်မည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ အထိရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုကြည့်၊ ငါပြီးပြီ၊ ဒါကကူညီမယ်ဆိုရင်ငါ 90M ပေါ့။
စွမ်းအင် 24 /7၏ကြီးမားသောငွေပမာဏ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သကဲ့သို့ငါငြီးငွေ့ခံစားရထိုနေ့၏တစ်ခုတည်းသောအချိန်, အိပ်မသွားမီညအချိန်တွင်ပါ!
စသည်တို့ကို junk စားစရာဘို့အလိုဆန္ဒ, အရက်များအတွက်အလိုဆန္ဒ,: ငါအနိမ့်ပြင်းထန်မှုဥပမာဘဝကတိုကျတှနျးတှနျးလှနျနိုငျ
အမျိုးသမီး MY VIEW ပြောင်းလဲသွားပြီ! ငါအရမ်းပူသောချိုကိုတွေ့သောအခါအိုင်တီကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းငါလုပ်နေသည်မှာလုပ်နေသည်။ ငါသူမ၏ရှည်ကြာစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။
ငါ Rockstar ကဲ့သို့ပေါင်းသင်းနိုင်ပါတယ်! ငါလူသစ်များနှင့်စကားပြောရတာကိုနှစ်သက်ပြီးလူသားဆက်သွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးအကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်။ PMOing 24/7 နေချိန်မှာလူဆက်သွယ်မှုမည်သို့ဖြစ်သွားသည်ကိုငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည်။
MY မျက်နှာပေါ်မှာနှင်းခူသို့သှားကွ၏ !!!!
ငါရယ် နည်းလမ်းနောက်ထပ် Emotion ။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ခံစားမှုများကိုချက်ချင်းကိုင်တွယ်နိုင်သည်၊ ခံစားရသည်၊ ကုသနိုင်သည်။ ထိုနည်းတူကျွန်ုပ်သည်အနာဂတ်၌ဒေါသ၊ ကြီးမားသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုစသည်ဖြင့်ပေါ်ထွက်လာမည့်စိတ်ခံစားမှုများကိုဖိနှိပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ငါ dopamine အဆင့်ဆင့်၏ balancing ကြောင့်နည်းနည်းအရာရာ၌လမ်းကိုပိုမိုပြည့်စုံချက်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာပါ။ ငါနေဝင်ချိန်, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဘီယာ, ဂီတအံ့သြစရာအသံ, စတာတွေတစ်စုံတစ်ဦး, လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အားနည်းချက်စကားပြောဆိုမှုပျော်မွေ့
ငါဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့လိင်မဆက်ဆံတော့ဘူး။ ငါသာအေးမြသောကြက်တစ်ကောင် (ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး + ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ကိုရှာပါကကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်ချိန်းတွေ့ရန်သို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်ရန်သာစဉ်းစားလိမ့်မည်။ သို့သော်မပါလျှင်ကျွန်ုပ်သည်အနမ်းနှင့်လိင်ကိုမပြတ်လိုအပ်နေသည်ဆိုပါက၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြင်ပအတည်ပြုရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်ပအရာများအပေါ် မူတည်၍ အတွင်း၌ကောင်းမွန်စွာခံစားရသည်။ မိန်းကလေးများအေးဖြစ်ကြပေမယ့်ပြီးမြောက်ဖို့အိပ်မက်နှင့်သွားကြဖို့အလွန်ကြီးစွာသောသောနေရာများရှိသည်ကြောင့်ငါ၏အစွမ်းအင်နှင့်ဘဝကိုစောင့်ရှောက်ယခုလမ်းကိုပိုမိုအရေးကြီးသောငါ့ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။
ငါလာမယ့် fuck ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးတပ်မက်တော့ဘူးကြောင့်ငါအနာဂတ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အတွေးအမြင်၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ ဒီအလုပ်ဘယ်လောက်လုပ်သလဲသိလား ငါစွဲလမ်း fucking နှင့်ဤ bullshit အလေ့အထကနေငါ့အ dopamine အားလုံးယူနေစဉ်ငါလုပ်နိုင်ဘူး။
ငါနည်းလမ်းနောက်ထပ်ဝိညာဉ်ရေးရာဗဟိုပြုခံစားရတယ်။ ငါ့အဘို့, PMO ငါ၏အပျက်စီး အသက်ဝိညာဉ်။ ငါရှက်ကြောက်ခြင်း 24/7 ခံစားရတယ်။ အခုတော့ငါ့ဗိမာန် (ငါ့ကိုယ်) ကိုရိုသေလေးစားစွာဆက်ဆံနေပြီဆိုတာငါသိပြီ။ နောက်မြင့်မားတဲ့ခံစားမှုကိုငါကိုယ်တိုင်မသုံးတော့ဘူး။
ဒါကများမှာ အဝတ် စာဖတ်ခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်း, ကျန်းမာစား, သင်တန်းများကိုယူပြီးမရှိလူမှုရေးမီဒီယာ, သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတဖန်ချိတ်ဆက်ပေးနေသည်, ဂျာနယ်များ, နက်ရှိုင်းသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်: ငါအချို့ပြီးသားသူတို့ကိုငါလေ့ကျင့်ကိုစတင်ခဲ့အလေ့အထများနှင့်အခြားသူများခဲ့ကြသည်, ငါ့ NoFap ခရီးစဉ်အတွင်းလေ့ကျင့် THE BEST အလေ့အထများ: DR ။ ယော်ဒန်မြစ်ခ Peterson
သင်သည်မည်သည့်အကြံဥာဏ်လိုအပ်လျှင်, အောက်တွင် comment ပေးပါ။ ငါကကူညီပေးခဲ့ဖူးသကဲ့သို့သင်တို့ယောက်ျားတွေကိုကူညီဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။
LINK - 90 fuck ဆိုတဲ့နေ့ရက်များ !!!!!!!!! အကျိုးကျေးဇူးများ + AMA